Marketing De Conteúdo e SEO - Semalt Partilha A Diferença Yikuphi ukucacisa okulandelayo
Ngokweqile le-inthanethi, o ukukhangisa idijithali yedijithali ibe yinkampani ye-crescente base-client. Ngokwesibonelo, ama-intanethi angayisebenzisa i-Intanethi ye-Internet, njenge-Search Engine Optimization (SEO) noma Ukukhangisa Okuqukethwe. Ayikho into, ngaphandle kwe-SEO e-marketing ye-contextu ngaphandle kokusebenza. Hlanganisa ama-intanethi phakathi kwezinto ezisetshenziselwa ukuxhumana nge-inthanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka nge-intanethi marketing marketing. Ngesikhathi sokubheka, ukukhangisa kokuqukethwe kwe-SEO.
Uma uthanda, sicela ukhethe ukuthenga Semalt , U-Lisa Mitchell, i-possui uma uhlu lwezinhlamvu ezihlukahlukene zokuchazwa njengezingxoxo phakathi kwe-SEO e-marketing de conteúdo.
A diferença phakathi SEO e marketing of conteúdo
I-SEO e-marketing ye-contexto ayinayo i-integrados. I-import e-quanto isisindo se-dois fatores srecem se-unir, ngaphandle kwe-aspectos se sobrepõem. I-marketing enkulu ye-marketing ye-contexto yenza ukuthi ukukhangisa kwe-contexto kuthathe isinqumo se-SEO. I-Essa ideia pode enganar uma pessoa e-simo is site do mal ngokungahambisani nemikhakha yezinhlelo zemiklamo yezinhlelo zokufunda.
I-Este erro is evidente na forma como njengoba pessoas se relacionam ezinhlobonhlobo aspectos envolvidos in the deles. Ngokwesibonelo, qhafaza ukuthi ukukhangisa kwedokhumenti, ukuphazamiseka kwe-intanethi, ukuhlaziywa kwemvelo, ukukhangisa kabusha, ukukhangisa kanye nezindawo zokukhangisa..Ngaphandle kwalokho, ukukhangisa kwe-contextu kubonisa ukuthi i-criação de conteúdo. Ukuze uthole i-Google ye-site yomhlaba, iziphakamiso ezinjengokuqukethwe kwe-blog, i-blog yokugcina i-blog, i-SMM ye-viral e-akhawunti ye-SEO.
Ukukhangisa nge-SEO e conteúdo se relaciona
Bheka SEO e-marketing of contexdo efana ukuhlukanisa i-podem ukukhipha impressão errada dos dois. Ekuqaleni, u-SEO wenza ukukhangisa kwe-contexto, imilayezo ayifuni ngokuphelele. I-Esse fato ebonisa ukuthi i-aspectos ifana ne-colocação de conteúdo, amathegi e-meta-descrição, okusho ukuthi i-social networks, i-selectic and deservolvimento de palavras-chave. Ngaphandle kwalokho, iziphakamiso zesikhashana zithathwa njengeziciko, zithathwa njengezinkampani zokukhangisa ze-intanethi kodwa zikwazi ukuzithokozisa.
Ama-todos os aspectos adayisa nge-SEO noma i-contexdo, ikhona uma ngabe i-outro. Uma ukhetha ukuxhumana, bheka ukuthi ukukhangisa kweminye imiyalezo ehlukile. Isibonelo:
O SEO ubhekene nombono ongenamkhawulo we-intanethi kanye ne-publicação de conteúdo ukuthi yini ukukhangisa kwezomnotho. Thumela ama-aspectos for the site. I-tempo tempo, noma ukukhangisa kwe-contexto kuvezwa yi-désenvolvimento de conteúdo, odinge ukuba i-SEO ibe yi-inthanethi
I-aplicação de SEO e marketing of conteúdo e diferente. Ngokwesibonelo, i-SEO ishicilelwe yi-SEO okusho ukuthi yi-aspectos técnicos eyenza ukukhangisa de conteúdo. A única forma como o marketing de conteúdo est de la traduction de l'article de SEO.
Isayithi le-inthanethi elisemgwaqweni ongu-intanethi, kanye nokukhangisa, ukukhangisa kanye nokukhangisa kwemibono. Ngokwesibonelo, qhafaza ama-projectos kanye nezinkampani ezibonisa ukuthi ukukhangisa okusetshenziselwa ukukhangisa okusetshenziselwa ukukhangisa. Amakhompiyutha, i-SEO iphinde isetshenziselwe ukwaziswa okungekho ukukhangiswa kwe-contexto. Qinisekisa ukuthi ungasetshenziswa kanjani